Ukuhombisa | Etimnga 2021
I-Polyester Rugs Pros and Cons
Iingubo zepolyester kunye neengozi kunye neentlobo ezahlukeneyo kunye nendlela yokucoca. Fumanisa ukuba i-polyester rug yeyona ilungileyo kuyilo lwakho lwangaphakathi.
Izityalo ezibomvu zangaphakathi (Iindidi kunye neengcamango zezindlu)
Isikhokelo kwizityalo zangaphakathi ezibomvu ezineentlobo ezaziwayo zezityalo ezinamagqabi abomvu, ubungakanani obuncinci kunye neendidi zeentyatyambo. Bona ezona ndlu zibomvu zibalaseleyo.
Ukukhetha njani Ubungakanani beRug (Isikhokelo soYilo)
Isikhokelo ngendlela yokukhetha ubungakanani bombhoxo ngobeko obudumileyo kwigumbi lokulala, igumbi lokutyela, ukungena, igumbi lokuhlambela kunye negumbi lokuhlala. Fumana ubungakanani bombhoxo obudumileyo bokusebenzisa.
Ukubekwa kweRug yokulala (Isikhokelo soBeko)
Isikhokelo sokuyilwa kombhoxo kwigumbi lokulala ngesona simo sibalaseleyo kunye nolungelelwaniso lweebhedi ezahlukeneyo, iiragi kunye nobukhulu begumbi. Jonga imifanekiso yombhoxo phantsi kweebhedi.
Iindidi zeCactus yangaphakathi (Isikhokelo seNdlu)
Iindidi zecactus yangaphakathi enezona ndlu zilungileyo zokukhetha, iintlobo ezincinci kunye neengcebiso zokhathalelo. Jonga i-cactus houseplants picture gallery.
Izityalo zangaphakathi ezifana nokukhanya kwelanga ngokuthe ngqo
Isikhokelo kwizityalo zangaphakathi ezifana nokukhanya kwelanga ngokuthe ngqo kunye nezona ndlu zigcweleyo zelanga kunye nokunkcenkceshela kunye nendlela yokukhathalela iingcebiso. Fumana izimvo zezityalo ngaphakathi.
Nguwuphi umbala weemfama ekufuneka ndizikhethile?
Ukukhetha okungaboniyo umbuzo othandwayo ngowuphi umbala weemfama endifanele ukuzikhetha? Apha sabelana ngesikhokelo sethu sokuyila iimfama kuyilo lwakho lwangaphakathi.
I-Bamboo vs i-Silk Sheets (Umahluko kunye neProses kunye ne-Cons)
Thelekisa i-bamboo vs i-silk sheet kunye nepros & cons, indleko kunye neyona nto ilungele igumbi lakho lokulala. Jonga umohluko wesilika kunye neeshiti zoqalo.
Iipolypropylene vs iRaws Rugs (Iinkonzo kunye neNgxaki)
Iipolypropylene vs iiraphu zewulu zilungile kunye neengozi, iindleko, ukuhlala ixesha elide, ukhuseleko kunye neengcebiso zokucoca. Jonga eboyeni okanye iipolypropylene iiragi zilungele ikhaya lakho.
Izityalo zangaphakathi ezisusa ityhefu
Isikhokelo kwizityalo eziphezulu zangaphakathi ezisusa ityhefu ekhayeni lakho. Jonga uluhlu lwezona ndlu zithandwa ngaphakathi endlwini ezinokunciphisa ungcoliseko lomoya ngokucoca umoya ekhayeni lakho.
Izityalo ezibomvu zangaphakathi (Iindidi kunye neMibono yokuTyala indlu)
Eyona ndawo ilunge kakhulu yokuKhanya okuKhanyayo (Isikhokelo sokuthenga)
Jonga iipokethi zethu eziphezulu zezona zixhobo zilula ziphantsi ezilula ukuzinyamekela. Izityalo zokukhanya eziphantsi ngaphakathi ezithandwayo zibandakanya iifeni, izityalo zenyoka, iiLili zoxolo ..
Iingcamango zePeyinti yoMntu
Fumana eyona mibala iphambili yomqolomba wokuyila vibe efanelekileyo ekhayeni lakho. Bona ukhetho oluphezulu lwepeyinti kwigumbi lomdlalo womqolomba wendoda, ibha emanzi, kwigumbi elingaphantsi okanye kwigumbi leendaba. Ezi zoyilo zangaphakathi zibonisa ..
Indlela yokwenza igumbi lokulala elincinci libukeke likhulu
Izibuko-Ukubonakaliswa kwesipili kunokunyusa ngokwenyani indawo yakho yokulala kwaye kuncede ukuyikhanyisa. Singasathethi ke ngezibuko ezongeza ubukhazikhazi kwigumbi lokulala elingaphakathi. Amagumbi okulala angaphakathi aDala ngoku ungathanda: Uyilo lwegumbi lokulala lamaRoma - Uyilo oluCwangcisiweyo lweeNdawo zokulala- Mhlekazi ...
Lala phambi kweefestile zokuma, kubandakanya neengcebiso ezithandwayo kunye noyilo lweFeng Shui. Jonga imifanekiso yokubekwa kwebhedi phantsi kwefestile yoyilo lweengcinga.
Iinkqubo zaMboniso waMbala wepeyinti zasimahla
Iinkqubo zasimahla zokubonisa imibala kwi-Intanethi kunokuba luncedo ekufumaneni umbala ofanelekileyo wepende. Faka umfanekiso wegumbi lakho kwaye wongeze umbala wepeyinti owufunayo. Unokuzama imibala eyahlukeneyo ukubona ukuba liya kujongeka njani igumbi lakho ngaphandle kokudibana neesampulu, okanye ukuvavanya ukupeyinta inxenye yodonga. Apha ngezantsi sidwelise ezinye zezona zinto zilungileyo zokubonisa imibala yepeyinti ekhoyo ngoku.
Ungawutshatisa njani umbala woMdonga noMgangatho weenkuni
Ungawutshatisa njani umbala wodonga kunye nemithi yomgangatho kunye nemibala yepeyinti efanelekileyo yokukhanya, okuphakathi kunye noyilo olumnyama lomthi. Fumana iingcebiso zokudibanisa ipeyinti.
Iinkonzo kunye neengozi zePhepha lamaBambo
Isikhokelo kwiingenelo kunye neengozi zamashiti oqalo kubandakanya iintlobo zeephatheni zokuluka, iindleko kunye nokuthelekisa vs amaphepha omqhaphu.
Iingcamango zeWall Niche (Imifanekiso yoyilo)
Igalari yeengcamango zodonga kubandakanya igumbi lokuhlala, igumbi lokulala, ikhitshi kunye noyilo lokuhlambela. Jonga iifoto zodonga olungasasebenziyo zoyilo lwangaphakathi.
lihi hod amaxabiso elokhwe yomtshato
igumbi lobungakanani bombhoxo
mangaphi amangqina okutshata
Iskripthi somtshato wamakristu wangoku
danisa kumtshato wamaYuda